गाडीमा यात्रा गर्दा किन उल्टी हुन्छ ? कारण र समाधानका उपाय - Internet Sansar
Home / Health / गाडीमा यात्रा गर्दा किन उल्टी हुन्छ ? कारण र समाधानका उपाय
internetsansar October 14, 2019	Health Comments Off on गाडीमा यात्रा गर्दा किन उल्टी हुन्छ ? कारण र समाधानका उपाय 345 Views
यात्रा आफैँमा रमाइलो हुन्छ । तर, सवारी साधनमा यात्रा गर्दा बान्ता आउने, टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने भयो भने यात्रा सजायसरह हुन्छ । यसलाई मोसन सिकनेस भनिन्छ । यसले लामो समय असर गर्दैन । तर, सधैँ यात्रा गरिरहनेहरूका लागि भने यो ठूलै समस्या हो ।त्यस्तै भिडियो गेम खेल्दा र माइक्रोेस्कोपबाट हेर्दा पनि मोसन सिकनेस हुनसक्छ । यी सबै अवस्थामा आँखाले गति अथवा चहलपहललाई देख्छ, तर हाम्रो शरीरले त्यसलाई अनुभूत गरेको हुँदैन ।
दिमाग र शरीरबीच तालमेल नहुँदा मोसन सिकनेस हुन्छ । यो पाँचदेखि १२ वर्षका बच्चा, महिला र बुढापाकालाई बढी हुन्छ । मोसन सिकनेस शरीरका इन्द्रियहरूको सन्तुलनसँग सम्बन्धित छ । जब कान, आँखा र शरीरले गति अथवा चहलपहलसम्बन्धी सूचनालाई विरोधाभाषपूर्ण ढंगले हाम्रो दिमागमा प्रवाह गर्छ, तब मोसन सिकनेस हुन्छ । हाम्रो शरीर गतिमा छ भने भित्री कान (लेबिरिन्थ) ले थाहा पाउँछ तर, शरीरका अरु भागले त्यो थाहा नपाउँदा फरक फरक सूचना हाम्रो मस्तिष्कमा पुग्छ ।
उदाहरणका लागि, तपाईँ बसमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको शरीर हल्लिरहेको हुन्छ । जसलाई तपाईँको भित्री कानले चाल पाउँछ । तर, तपाईँको आँखाले यो हलचल देख्दैन । यस्तो विरोधाभाषको सूचना मस्तिष्कमा पुग्दा मोसन सिकनेस हुन्छ । मोसन सिकनेस भयो भने के गर्ने त ? भइसकेपछि केही गर्नुभन्दा हुन नै नदिनु राम्रो ! किनभने एकचोटी यसका लक्षण देखापर्न थालेपछि रोक्न गाह्रो हुन्छ । सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको गाडी चढ्नुभन्दा एक घण्टाअगाडि वाकवाकी नलाग्ने औषधि खानु हुन्छ । यस्तो औषधि डाक्टरसँग सल्लाह नलिइकन खाए हुन्छ । मोसन सिकनेस कुनै रोग होइन । यो शारीरिक प्रतिक्रियामात्र हो । त्यसैले मोसन सिकनेसबाट डर मान्नुपर्दैन ।
Previous दुखद खबरः जापानको आँधीमा ३६ को मृत्यु
Next जीवनमा एकपटक मात्र भएपनी गर्नुहोस यी कामहरु जसले तपाईंको भाग्य चम्किनेछ ? सेयर अवस्य गर्नुहोला